Jireessa haaromsa fooyya'insa %PRDUCTNAME keetiif mirkaneessa. yoo fooyya'insi haaraan jireessa ta'e, haaromsa naqachuuf filuu ni dandeessa. Naqachuun booda, yoo ati galeeloo ijaarsaaf haayyama barreessite, haaromsa ijaaruu dandeessa.
Naqanni altokkoo jalqabnaan,kabala guddinaafi qabduuwwan sadi qaaqairratti ni ilaalta.Qabduuwwan Afuur fannoo fiFufsiisuufi itti fufsiisuu nidandeessa.Naqata kutuufi faayilii naqatame walakkaadhaan haquuf hiisii cuqaasi.
Erga naqanni xumuurameen booda,jjaarsa haaromsaa jalqabuuf Ijaariicuqaasuu nidandeessa.Qaafa dhugoomsaa niagarta,bakka%xUFUUFFILUU DANDEESSUTTI.
Sirnootadalaga muraasaa jalatti, hujeekan gara ukaanka naqataatti,faayiliinaqataa teessaa hinqabneefi,barruuqindaa'inaa jalqabuuf fariiribarbaachisa.
Ijaarsa haaromsaan booda faayilii naqataa iddoo lokaa'uuf hafuu nidandeessa.
Haaroomsa Karaarraa jalqabuu
Title is: Haaromsaaf Mirkaneessi